သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ယင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် “ အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ်များ” ဆိုဒ် (BESTFOREXEAS) ထိုသုံးစွဲသူများသည်သင့်ဖြစ်ရပ်တစ်အမှတ်ရစရာတဦးတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါစုံလင်သောနေရာနှင့်စျေးသည်များကိုရှာဖွေတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောပလက်ဖောင်းပေးပါသည်။ သငျသညျကနေတစ်ဆင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများရှုမြင်သို့မဟုတ်အသုံးပြုတဲ့အခါအောက်ပါသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီသက်ဆိုင် https://www.bestforexeas.com
ဤသည် BESTFOREXEAS ၏ privacy ကိုအသိပေးစာဖြစ်ပါတယ်။ ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်“ ငါတို့”၊ “ ငါတို့” သို့မဟုတ်“ ငါတို့” သည် BESTFOREXEAS ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အကောင်းဆုံး FOREX EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX ROBOTS”, BESTFOREXEAS.COM အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်နေတာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ပုံတင်ရုံး 9001 Wilshire Blvd, Los Angeles မြို့,, CA 90210, အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကအကြှနျုပျတို့သညျအကွောငျးကိုမှတ်တမ်းတင်သောသူအပေါင်းတို့သည်သတင်းအချက်အလက် ပတ်သက်. BESTFOREXEAS မူဝါဒ၏သငျသညျအကြောင်းကြားရန်အသိပေးစာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်ုပ်တို့သင့်ထံမှစုဆောင်းသည်ဟုမဆိုသတင်းအချက်အလက်စီမံဆောင်ရွက်ရသောအောက်ရှိအခြေအနေများအထဲကသတ်မှတ်, သို့မဟုတ်သင်အကြှနျုပျတို့အားပေး။ ဒါဟာမတတျနိုငျသသငျသညျကိုဖေါ်ထုတ်နိုင်သတင်းအချက်အလက် ( "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ") နှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖုံးလွှမ်း။ ပညတ်တရား၏အအခြေအနေတွင်နှင့်ဤအသိပေးစာတှငျ "ဖြစ်စဉ်ကို" နည်းလမ်းကိုသုံးစတိုးဆိုင်, လွှဲပြောင်း, စုဆောင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်ပြုမူ။
BESTFOREXEAS သင်မပျော်ရွှင်နေသောနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအချက်များရှိပါသည်လျှင်, သင်၏သာပြန်လည်ကုချက်ချင်းကြှနျုပျတို့၏ website မှထွက်ခွာကြောင်းနောင်တ။
BESTFOREXEAS အလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့ privacy နဲ့လျှို့ဝှက်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယူပါ။ BESTFOREXEAS ကြှနျုပျတို့၏ website အားလုံးကိုဧည့်သည်များဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုသူတို့အနေဖြင့် unintended မဆိုရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့်မတော်တဆတတိယပါတီ၏လက်တော်သို့ကျမည်မဟုတ်ကြောင်းသိရန်ခွင့်ရှိသည်နားလည်ပါသည်။
BESTFOREXEAS သငျသညျအကြှနျုပျတို့အားပေးသမျှသောအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ရန်, သင်အပြန်အလှန်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒသည်အမေရိကန်နှင့်အတူလိုက်နာ & ဗြိတိန်ဥပဒအညီအီးယူအထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေ (GDPR) ကလိုအပ်ကြောင်းအပါအဝင်အကောင်အထည်ဖော်။
ပညတ္တိကျမ်းသင့်အခွင့်အရေးများနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ထိန်းချုပ်မှုပတ်သတ်ပြီး၌သငျကြှနျတျောတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားအကြောင်းသင့်ပြောပြရန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ Bestforexeas သငျသညျမှာပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖတ်ပြီးကြောင်းတောင်းခံနေဖြင့်ယခုဤအမှုကို http://www.knowyourprivacyrights.org
အကြှနျုပျတို့သညျအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် processing သောခြေရင်း
ပညတ္တိကျမ်းငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကို process ခြောက်လသတ်မှတ်အခြေစိုက်စခန်း၏ထားတဲ့အောက်မှာဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားများအတွက်အခြေခံသင်အကြောင်းကြားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသောအပေါ်အခြေခံမရှိတော့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ် အကယ်. ကျွန်တော်တို့ဟာချက်ချင်းသင့်ရဲ့ဒေတာ processing ကိုရပ်တန့်ကြမည်။
အကယ်. ဥပဒ BESTFOREXEAS ခြင်းဖြင့်လိုအပ်ပါကအခြေခံပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကို process ကိုဆက်လက်နိုငျကွောငျးဆုံးဖွတျခဲ့ကြရသောအောက်မှာမဆိုသစ်ကိုအခြေခံသင်အကြောင်းကြားရလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူတစ်ဦးသဘောတူထားသောတာဝန်ကြောင့် processing သတင်းအချက်အလက်များ
သငျသညျ, အ BESTFOREXEAS က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် account တစ်ခုဖန်တီးကျွန်တော်တို့ဆီကကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုရန်သဘောတူသောအခါ, စာချုပ်သင်နှင့်ငါတို့စပ်ကြားဖွဲ့စည်းသည်။
ကြောင်းစာချုပ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့ကိုပေးသတင်းအချက်အလက်များကို process ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်အချို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျအကြံပြုချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်မည်သို့ကြှနျုပျတို့၏ website ကို အသုံးပြု. အနေဖြင့်အများဆုံးရရှိရန်အပေါ်အကြံပြုချက်ပေး
BESTFOREXEAS အဲဒီမှာငါတို့စပ်ကြားမှာစာချုပ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကျွန်တော်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာစာချုပ်ထဲသို့မဝင်ရမတိုင်မီကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါမေတ္တာရပ်ခံသောအခြေခံပေါ်မှာဤသတင်းအချက်အလက်စီမံပါမည်။
ထို့အပြင်ကျွန်တော်တစ်ဦးယေဘုယျလမ်းအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်စုစည်းနိုင်ပြီးကျနော်တို့ပေးမယ့်အထူးသဖြင့် service ကိုမှလေးစားမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြည့်ဖို့ဥပမာလူတန်းစားသတင်းအချက်အလက်ပေးသူကကိုအသုံးပြုပါ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့ကိုအသုံးပြုပါက, တစ်ဦးချင်းအဖြစ်သငျသညျကိုယျတိုငျကိုသက်သေပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျွန်တော်တို့ကိုအကြားစာချုပ်ကုန်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြစ်စေပါတီရပ်စဲသည်အထိ BESTFOREXEAS ဤသတင်းအချက်အလက်ကို process ကိုဆက်လက်ရလိမ့်မည်။
မဟုတ်ရင်ထိုကဲ့သို့သောသငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website browse သို့မဟုတ်သင်ကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုပြီးပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးသည့်အခါအဖြစ်ငါတို့စပ်ကြားမျှစာချုပ်ဆက်ဆံရေးရှိသည့်အခါအချို့သောလုပ်ရပ်များမှတဆင့်, သင်သတင်းအချက်အလက်ကို process ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရန်သင့်ခွင့်ပြုချက်ပေး ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖြစ်နိုင်သည်။
တတ်နိုင်သမျှကျနော်တို့ဥပမာအားဖြင့်, cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုရန်သဘောတူရန်သင့်ကိုတောင်း, ဒီသတင်းအချက်အလက်ကို process ရန်သင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်ရည်ရွယ်။
တခါတရံသင်သည်ထိုကဲ့သို့သောသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသငျသညျကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကျွန်တော်တို့ကို reply ဖို့မျှော်လင့်ထားလို့မှအီးမေးလ်ဖြင့်တစ်ဦး Message ပေးပို့သည့်အခါများကဲ့သို့လုံးလုံးလြားလြားသင့်ရဲ့သဘောတူညီခကျြပေးနိုငျတယျ။
သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်အချက်အလက်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုမှဝန်ခံကြပါပြီဘယ်မှာ မှလွဲ. ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသငျသညျကိုဖေါ်ထုတ်မယ်လို့မဆိုလမ်းအတွက်အသုံးမကြဘူး။ ကျနော်တို့ကယေဘုယျလမ်းထဲမှာစုပေါင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စာမျက်နှာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဥပမာလူတန်းစားသတင်းအချက်အလက်ပေးသူကသုံးနိုင်ပါသည်။
BESTFOREXEAS သင်သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ရုပ်သိမ်းပေးရန်အထိဤအခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို process ကိုဆက်လက်သို့မဟုတ်ပါကကျိုးကြောင်းဆီလျော်သင့်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိတော့ပါယူဆနိုင်ပါသည်။
သငျသညျမှာအီးမေးလ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သင့်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရုတ်သိမ်းစေခြင်းငှါ [အီးမေးလျ protected]။ သင်တို့သည်ဤမျှကျင့်ကိုကျင့်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်တို့ကိုထပ်မံကြှနျုပျတို့၏ website သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
တရားဝင်အကျိုးစီးပွားအလို့ငှာသတင်းအချက်အလက်များ WE PROCESS
BESTFOREXEAS တရားဝင်အကျိုးစီးပွားဒါလုပ်နေတာ၏, သင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေ, လည်းမရှိအပျေါအခွခေံသတင်းအချက်အလက်စီမံဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။
ကြှနျုပျတို့သညျဤအခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို process ဘယ်မှာကျနော်တို့မှသတိထားထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတော်မူပြီးမှပြုပါ:
processing (သို့မဟုတ် processing မဟုတ်) ရှိမရှိသင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသင့်ရဲ့ဒေတာကို process ဖို့မြျှောလငျ့, သင်လိုခြင်းရှိမရှိမယ်လို့ရှိမရှိ, အလှည့်လည်ထဲမှာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကကျိုးကြောင်းဆီလျော်စဉ်းစားပါ
ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဤအခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဒေတာကို process စခွေငျးငှါ:
ဆန့်ကျင် insuring သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သောကြောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဉာဏ်ကိုရယူ
WE တရားဝင်တာဝန်ကြောင့် processing သတင်းအချက်အလက်များ
BESTFOREXEAS အခြားလူတိုင်းအတွက်ကဲ့သို့ဥပဒေဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်တော်တစ်ဦးပြဌာန်းတာဝန်နှင့်အတူလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို process ရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုသင်ဖတ်ခံရသည်ဟုသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမြင်ကွင်းကိုနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက် post ခွင့်ပြုကူးယူ, ဒေါင်းလုပ်လုပ်, သို့မဟုတ်အခြားလူများကအသုံးပြုခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့သဘောတူညီချက်, သဘောမတူသို့မဟုတ်ကျေးဇူးတင်စကားသိရှိစေရန်အခြားဧည့်သည်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုမှလာမယ့် icon တစ်ခုအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်း
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပို့စ်တင်မှာတော့အဲဒါကိုအသုံးပွုနိုငျသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ privacy ကိုအဆငျ့အကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျေနပ်ဖို့သငျသညျအထိဖြစ်ပါတယ်။
WE တိကျတဲ့အိုင်တီပြသ OR ဝေမျှခွင့်ပြုပါရန် မှလွဲ. ဤအချက်အလက်မသုံးပါနဲ့။
သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာအခြေခံလည်းမရှိထောက်ပံ့ပေး, ငါတို့သမ္မာသတိမှာငါတို့သည်သင်တို့ posted ပြီကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖျက်ပစ်ရန်သင့်တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူလိမ့်မည်။ သငျသညျအီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်တောင်းဆိုမှုစေနိုင်သည်။
ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာကိုပတ်သတ်သောတိုင်ကြားချက်
ကျနော်တို့အသုံးပြုသူ generated content တွေကိုပုံမှန်ဖြစ်သွားဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ကျွန်တော်အမြဲအဖြစ်မကြာမီအကြောင်းအရာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မတတျနိုငျကွသညျ။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာအကြောင်းအရာမဆိုနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြားပါက, ငါတို့သည်သင်တို့၏တိုင်ကြားချက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရလိမ့်မည်။
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေခံမှန်သည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အဘယ်သူ၏ညာဘက်ပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မည်မှအဖြစ်တရားသဖြင့်စီရင်စေရန်ရှိသည်: ဥစ္စာဒါမှမဟုတ်သင်တော့လို့သောအကြောင်းအရာ posted သူ၏။
ငါတို့သည်သင်တို့၏တိုင်ကြားချက် vexatious သို့မဟုတ်မည်သည့်အခြေခံခြင်းမရှိဘဲထင်လျှင်, ငါတို့သည်အကြောင်းကိုသင်တို့နှင့်အတူအကိုက်ညီခြင်းမရှိရ။
သင့်ပေးချေမှု METHOD သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ငွေပေးချေမှုရမည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအများကခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့၏ website မှတဆင့်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုလွှဲပြောင်းဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏န်ထမ်းများနှင့်ကန်ထရိုက်တာများကဝင်ရောက်ခွင့်စရာမလိုတော့ဘူး။
ငွေပေးချေမှု၏အချက်မှာ, သငျသညျကမ္ဘာ့ဖလား Pay ကို / Sage Pay ကို / PayPal က / Moneybookers / Stripe ဟာသို့မဟုတ်တခြားဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ငွေပေးချေမှု service provider က၏ website တွင်လုံခြုံတဲ့စာမကျြနှာသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ အဲဒီစာမျက်နှာကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာစာမျက်နှာနဲ့တူကြည့်ဖို့ branded စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်မဟုတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Support Team မှတစ်ဦးကမက်ဆေ့ပို့ခြင်း
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါ, တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ, ငါတို့၏ website မှတဆင့်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျနော်တို့သင်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ reply နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီဒေတာစုဆောင်းပါ။
သင့်ရဲ့တိုင်ကြားချက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အချို့နဲ့အခြားသူတစ်ဦးကိုဆက်သွယ်မှကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်လျှင်, ငါတို့သည်သောအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရန်သင့်တိုင်ကြားစာတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များကိုအချို့ကိုပေးစေခြင်းငှါဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ငါတို့ကဲ့သို့ကွာခဏတတ်နိုင်သမျှဤသို့ပြုပေမယ့်သတင်းအချက်အလက်ကဘာလဲဆိုတာကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးပါဘူးရှိမရှိ, ကြှနျုပျတို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ရန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိများအတွက်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လည်းငါတို့များကိုဝန်ဆောင်မှုများ၏အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ဤရင်းမြစ်မှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များဖေါ်ပြခြင်းစာရင်းဇယား compile, ဒါပေမယ့်မပေးသငျသညျကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်မယ့်လမ်းသို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသည်ကိုတစ်ဦး Affiliate အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်သင့်စွမ်းရည်၌သငျတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးပြီးမှသတင်းအချက်အလက်များသည်။
BESTFOREXEAS ဆို Affiliate သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဤမူဝါဒအပြန်အလှန်ဖော်ဆောင်ရန်သဘောတူရန်မျှော်လင့်ထား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှာ cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ server များပေါ်တွင်နှင့်သူ၏န်ဆောင်မှုကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့တတိယအုပ်စုတွေက operated ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုလုပ်ကိုင်ပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲခြင်းဖြင့်ချထားပါသည်။
သင့် Browse လုပ်ဆောင်ချက်များမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင် web စာမျက်နှာများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာကိုဘို့ငါတို့ဆာဗာများရန်သင့် web browser ကိုအားဖြင့်တောင်းဆိုမှုများကိုမှတျတမျးတငျထားနေကြသည်။
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ပထဝီတည်နေရာ, သင်၏ Internet service provider ကနှင့်သင့် IP address ကိုအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်။ ကျနော်တို့သင်တို့ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စက်ကိရိယာနှင့်မျက်နှာပြင် resolution ကိုအမျိုးအစားအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကို browse ဖို့အသုံးပြုနေသည်ဆော့ဖ်ဝဲအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website နှင့်မည်ကဲ့သို့ငါတို့သည်သင်တို့မှအကြောင်းအရာများကိုလုပ်ဆောင်အပေါ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေရဲ့လူကြိုက်များအကဲဖြတ်ရန်စုစုပေါင်းအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။
ကျနော်တို့ယခင်လည်ပတ်မှုကနေသင်တို့ကို အကြောင်းပြု. ကိုသိသည်အခြားသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်လျှင်, ဒေတာဖြစ်နိုင်သည်သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်မဟုတ်ရင်တောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသငျသညျကိုဖေါ်ထုတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
re-စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website အချို့ကိုသင်ကတခြား website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါအသငျသညျကြှနျုပျတို့၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကြော်ငြာအားဝတျပွုနိုငျရနျအလို့ငှာ browse လာသောအခါသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တစ်ဦး cookie ကိုအားမရပါဝငျသညျ။
ကျနော်တို့အခြိနျမှနျမှ Re-စျေးကွက်ရှာဖွေရေးန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ့်တတိယပါတီသုံးနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် အကယ်. cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုမှဝန်ခံလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကြော်ငြာမြင်ရလိမ့်မည်။
သင့်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များဖော်ထုတ်ခြင်း and Share
ကျနော်တို့ (ဒီအသိပေးစာထွက် set အဖြစ် မှလွဲ. ) မည်သည့်တတိယပါတီဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ကြဘူးပေမယ့်, ငါတို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်သွယ်ဝိုက်အဘယ်သူ၏န်ဆောင်မှုကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့တတိယပါတီများအနေဖြင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မှတက်လုပ်ကြောင်းဒေတာလက်ခံရရှိသည်။
BESTFOREXEAS သည်ဤပါတီများရယူဤနည်းပညာများသို့မဟုတ် data ကိုထိန်းချုပ်မရှိကြပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ဤ privacy ကိုအသိပေးဤတတိယပါတီများ၏သတင်းအချက်အလက်များအလေ့အကျင့်ကိုဖုံးလွှမ်းမထားဘူး။
ငါတို့သည်လည်းအချိန်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းသည်အခြားရှုထောင့်မှာရှိတဲ့အချိန်ပေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂအပြင်ဘက်နိုင်ငံများတွင် Outsourcing ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးနိုင်ပါသည်။
မည်သည့်အချိန်တွင်သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက်ကိုင်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်ပြန်လည်သုံးသပ်သို့မဟုတ်အပ်ဒိတ်လုပ်လိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပေးမဆိုသတင်းအချက်အလက်များ၏မိတ္တူရရှိရန်သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်တောင်းဆိုမှုပေးပို့လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးဖို့မြျှောလငျ့အခါတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ငါတို့သည်သင်တို့ပြောပြကြလိမ့်မည်, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကပေးဘို့မဆိုအခကြေးငွေမလိုအပ်ရှိမရှိ။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ကနေပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန္ဒရှိလျှင်သင်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
ကလေးများ BY site ၏အသုံးပြုမှု
သငျသညျ 18 အောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သာမိဘတစ်ဦးသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူထံမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူကြှနျုပျတို့၏ website သုံးနိုင်ပါသည်။
BESTFOREXEAS က်ဘ်ဆိုက်သင်၏ browser မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာအတည်ပြုရန်နှငျ့သငျကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဆိုဒေတာ encrypt လုပ် Secure Sockets Layer (SSL) ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်များကိုအသုံးပြုပါ။
သတင်းအချက်အလက်ငါတို့စပ်ကြားလွှဲပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခါတိုင်း, သင်ကသင့်ရဲ့ browser ရဲ့ URL bar ကိုသို့မဟုတ် toolbar ကိုတစ်ဦးတံခါးပိတ်သော့ခလောက်သင်္ကေတများသို့မဟုတ်အခြားယုံကြည်မှုအမှတ်အသားကိုရှာဖွေနေခြင်းဖြင့် SSL ကိုသုံးပြီးပြုကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
သင်ဤ privacy ကိုမူဝါဒနှင့်သို့မဟုတ်ပါလျှင်မပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင်မဆိုတိုင်ကြားမှုများရှိပါတယ်သင်သည်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
personal data တွေအတွက် retention ကာလအတွင်း
အဖြစ်မဟုတ်ရင်ဒီ privacy ကိုအသိပေးစာတွင်ဖော်ပြထားသော မှလွဲ. သာနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်သည်အဖြစ်အဘို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုစောင့်ရှောက်:
ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားသောတိုင်းနိုင်ငံသို့မဟုတ်ဥပဒေဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏တရားကိုလိုက်နာမှသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကသင့်ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏တရားကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ထင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ထံကစကားကိုနားထောငျလိုသငျ့သညျ။
သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ BESTFOREXEAS က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသုံးပါရန်ဆန္ဒရှိရှိမရှိအဖြစ်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။
ဒီနည်းကိုမူပိုင်ခွင့်မူဝါဒပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေး / ပြုပြင်မွမ်းမံ
BESTFOREXEAS အချိန်ကနေအဖြစ်လိုအပ်သောအချိန်ဤ privacy ကိုအသိပေးအပ်ဒိတ်လုပ်လိမ့်မည်။ သငျသညျလျှောက်ထားသောအသုံးအနှုန်းများသူတို့အားသင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုနေ့၌ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာကဒီမှာ posted နေကြသည်။ ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းကိုသာသင့်ရဲ့မှတ်တမ်းများများအတွက်မိတ္တူ print ထုတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။